admin – Page 151 – Wakaaladda Wararka Hiilnews
Home»Entries posted by admin (Page 151)
Danilo oo OOHIN jabsaday Xalay kaddib Dhaawac ka soo gaaray kulankii Super Clasico
By admin on 17/10/2018 Wararka Ciyaaraha HNN
Arbaco, October, 17, 2018(HNN) Danilo ayaa dhaawac looga saaray kulankii saaxiibtinimo ee xalay Sacuudiga ku dhex maray Argentina iyo Brazil. Brazil ayaa gool soo daahay kaga adkaatay xulka Argentine kulan ay ka soo qeyb galeen taageerayaal badan iyadoona xulka Samba la guddoonsiiyay Koob kaddib guushoodii. Danilo ayaa dhaawac canqowga lugta bidix garoonka looga saaray isagoona […]
Akhriso: Itoobiya ma u bisishahay inay dumar hogaamiyaan
By admin on 17/10/2018 Wararka HNN
Arbaco, October, 17, 2018(HNN) Ra’iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa kala bar xubnihiisa golaha wasiirrada u magacaabay haweenka, oo ay ka mid tahay wasaaradda gashaandhiga ee dalka Itoobiya. Mr Abiy oo go’aankiisa uga hadlay kal fadhiga baarlamaanka ayaa sheegay in dumarka ay yihiin” kuwa ku yar dhanka musuqmaasuqa marka la barbar dhigo ragga” ayna […]
Akhriso: Ajendaha kulanka maanta ee golaha shacabka Soomaaliya
Arbaco, October, 17, 2018(HNN) Xildhibannada baarlamanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta yeelanaya kulankoodii caadiga ahaa. Ajendaha kulanka maanta ayaa ah akhrinta koowaad ee hindise sharciyeedka bartilmaameysiga cunaqabateynta dhaqaalaha dalka. Xildhibaanada ayaa xalay lagu wargeliyay in maanta oo Arbaco ah inuu jiro kulanka baarlamaanka.isla markaana looga baahan yahay inay soo xaadiraan. Hindise sharciyeedka bartilmaameysiga cunaqabateynta dhaqaalaha dalka […]
DHAGEYSO: Ciidamo cusub oo lagu wareejiyay amniga Garoowe
Arbaco, October, 17, 2018(HNN) Ciidamo ka tirsan kuwa Booliska Puntland gaar ahaan kuwa xasilinta ayaa waxaa lagu wareejiyay amniga magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal oo falal amni dario ay ku soo bateen. Taliyaha qeybta Booliska gobolka Nugaal Janeraal Muxudiin Axmed Muuse oo si KMG ah xilkaas u haya ayaa ciidamada kula dardaarmay inay soo […]
Mareykanka oo sheegay in duqeyn ku dileen 60 ka tirsanaa Al shabaab
Arbaco, October, 17, 2018(HNN) Ciidamada Milatariga Maraykanka ee Afrika Africom ayaa sheegay in ay duqeyn ay ka geysteen deegaan ku dhow degmada Xaradheere ay ku dileen illaa lixdan ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab. Duqeyntan oo dhacday Jimcihii aynu ka soo gudubnay ayaa qoraal ka soo baxay ciidamada Maraykanka ee AFRICOM ayaa lagu sheegay in duqeyntan ay […]
Champions League Sanadkan Waa Mid Isku Dheeli Tiran Sababtoo Ah Real Madrid Waxa Ay Lumisay Cristiano Ronaldo!!.
By admin on 16/10/2018 Wararka Ciyaaraha HNN
Talaaddo, October, 16, 2018(HNN) Tababarihii hore ee kooxaha Real Madrid, Bayern Munich, Paris Saint-Germain haatana ah midka horkacaya kooxda Napoli ee Carlo Ancelotti ayaa si faah-faahsan uga warramay sababta uu xilli ciyaareedkan tartanka Champions League u yahay mid sidii hore ka dheeli tiran. Tartanka Champions League ayaa ahaa mid sanadihii ugu dambeeyay kooto ugu xidhan […]
Yaa adkaan lahaa haddii ay tartamaan Horyaalada Premier League, La Liga, Serie A, Ligue 1 iyo Bundesliga…(Eeg SHAX CAJIIB ah oo midkiiba laga soo xulay)
Talaaddo,October, 16, 2018(HNN) La Liga, Serie A, Premier League, Ligue 1 iyo Bendesliga haddii ay tartamaan yaa adkaan lahaa. Marca ayaa koox ka sameysay SHAX ay ka soo xushay xiddigaha ugu fiican horyaal kasta oo ka mid ah shanta sare. Haddaba EEG oo mid u codee: 1. La Liga 2. Premier League 3. Serie A […]
Anigu waxba ma saxin inta kulanka uu socday, mana eedeenayo garsoorka ciyaarta” – Luis Enrique
Talaaddo, October, 16, 2018(HNN) Tababaraha xulka qaranka Spain Luis Enrique ayaa qirtay inuusan wax sax ah sameynin intii lagu jiray qeybtii nasashada ee kulankii England, isagoo sheegay inuusan ku eedeyn karin garsooraha ciyaart wixii k dhacay ciyarta. Xulka qaranka Spain ayaa kala kulmay dhigooda England guuldaro lama filaan ee 3-2 ah, kulankii ay ku wada […]
Talaaddo, October, 16, 2018(HNN) Muruq waynta kubbada cagta ee Brazil iyo Argentina ayaa caawa wax aan ka badneyn saacad kaddib isku food saari doona kulan Saaxiibtinimo. Lionel Messi ayaa ka maqan ciyaartan waliba sabab aan la garaneyn iyadoo uu shaki wayn ku jiro mustaqbalkiisa xulka. Haddaba Express ayaa soo saartay SHAXDA macquulka ah ay ku […]
By admin on 16/10/2018 English News
The U.S. military on Tuesday announced its deadliest airstrike against the al-Shabab extremist group in Somalia in nearly a year, killing about 60 fighters. The U.S. Africa Command said Friday’s airstrike occurred near the community of Harardere in Mudug province in the central part of the country. According to its assessment no civilians were injured […]